Ciidamada Abu Mansuur oo laba shardi oo adag ku xiray in la qarameeyo | SMC
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Abu Mansuur oo laba shardi oo adag ku xiray in la...
Ciidamada Abu Mansuur oo laba shardi oo adag ku xiray in la qarameeyo
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo maanta markii ugu horreysay booqanaya gobolka Bakool ayaa waxaa safarkiisa ku gedaaman arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa muhiim ah.
Sida ay ogaatay SOUTHERN MEDIA u jeedka socdaalka Ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ugu muhiimsan, sidii loo Qarameyn lahaa ciidamada Abuu Mansuur oo qeyb ka ah dagaalka adag ee haatan lagula jiro dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.
Shuruudahaasi oo ay hordhigeen guddoomiyaha golaha shacabka, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyo Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa waxaa ka mid ahaa:
1-SHEEKH MUKHTAAR ROOBOW LA SOODAAYO KADIBNA
2– in ciidanka hoggaankiisa ay qeyb ka noqdaan
3– in dhaamaan hubka gaadiidka kala duwan ciidamada iyo saanadooda loo dhameystiro.
Roobow ayaa hadda u xiran dowladda Soomaaliya, kadib markii ciidamada Ethoipia ay ka soo xireen isagoo musharrax ahaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Lama oga sida ay wax noqo doonaan, balse Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa horay ugu guuleystay inuu Qarameeyo ciidamadii Ahlu Sunna iyo maleeshiyaad ku suganaa deegaanada maamulka Galmudug.
Previous articleDayuurad ay leeyihiin ciidanka Israel oo dhulka la soo dhigay & Wararkii ugu danbeeyey